ယူကရိန်းကို ရုရှားဝင်တဲ့ ( ၂၃) ရက်မြောက်နေ့ - Barnyar Barnyar
ယူကရိန်းကို ရုရှားဝင်တဲ့ ( ၂၃) ရက်မြောက်နေ့
March 18, 2022 နိုင်ငံတကာ 0
ယူကရိန်း- ရုရှားစစ်က ဒီအတိုင်း ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ယူကရိန်းပြည်သူတွေ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးသွားစရာ ရှိနေတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ တိုင်းပြည်က ထွက်ပြေးနေရတဲ့ ယူကရိန်း ၃သန်းကျော်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုရှားလေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နေအိမ် တိုက်တာ အဆောက်အအုံ တော်တော်များများ ပျက်စီးကုန်ပါပြီ။ အခြေအနေ ပြန်လည်တည်ငြိမ်မယ်ဆိုရင် ၁၀ စုနှစ်အတွင်း တိုင်းပြည်အခြေအနေ ကို အကောင်းဖက်ကို ရောက်နိုင်ဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ရုရှားကို ယူကရိန်းတွေက ကြုံသလိုခုခံတိုက်ခိုက်နေတာမို့ ရုရှားကလည်းမဲမဲမြင်ရာပစ်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပါပြီ ။ ဒါကြောင့် အရပ်သားအသေအပျောက်နည်းအောင်လို့ ပြင်သစ် ၊ ယူကေ နဲ့ ယူအက်စ် တို့ က ကုသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီကို ဒီနေ့ ယူကရိန်းအရေးကို ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပေးဖို့အတွက် ဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ဗြိတိန်ကတော့ ပိုလန်ှနိုင်ငံထဲကို လေယာဉ်ပစ်လက်နက်တွေနဲ့ စစ်သားတွေ ကို ထပ်မံပို့လွှတ်ထားပါတယ်။ ရုရှားက အရပ်သားတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး တိုက်ခိုက်လာပြီး စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက သက်မှတ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ယူကရိန်းကိုဝင်တိုက်ဖို့အတွက် အဆင်သင့်လုပ်နေတာပါ။
ရုရှားသမ္မတပူတင်က ဒီနေ့ ရုပ်သံကနေ မိန့်ခွန်းပြောသွားပါတယ်။ “ ဒီကနေ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာမှာ စစ်မှန်တဲ့မျိုးချစ် ရုရှား တွေနဲ့ သစ္စာဖောက်မျိုးဖျက် လောက်ကောင်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်သာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်မှာ အဲ့ဒိလောက်ကောင်တွေကို ရှင်းထုတ်သွားမယ်” လို့ ရုရှားစစ်ပွဲကို မထောက်ခံတဲ့ ပြည်သူအချို့ ကို ရည်ရွယ်ပြီး မိန့်ခွန်းထဲမှာ ထည့်ပြောသွားပါတယ်။.
ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့ ရုရှားတွေ ယူကရိန်းကို မဝင်ခင်မှာ ကျူးကျော်တော့မယ် ၊ ကျူးကျော်တော့မယ် ဆိုပြီး တောက်လျှောက်ပြောနေသလို အခုလည်း ပူတင်က စစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်နေပြီ လို့ ပြောနေပြန်ပါပြီ ။ အဲ့ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကရင်မလင်းအစိုးရက ဘိုင်ဒန်ကိုယ့်ပြောစကားကို ကိုယ်တာဝန်ယူရမယ်လို့ တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။
ခါကီဗ် ဒေသက ယူကရိန်း နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တွေကို ရုရှား စစ်တပ်တွကလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။ အခုဆိုရင် ထင်ရှား တဲ့ခေါင်းဆောင် ၂ယောက်တောင် ဖမ်းဆီးမိသွားပါပြီ ။
နိုင်ငံတကာအားကစားဆိုင်ရာ အနုညာတခုံရုံးက ရုရှားဘောလုံးအသင်း ၂၀၂၂ ကာတာကမ္ဘာ့ ခြေစစ်ပွဲကို ဝင်ကန်ခွင့်မပြုတော့ပါဘူး။ ရုရှားအသင်းကို ပိတ်ပင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာ အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်နဲ့ ရုရှား- ယူကရိန်းအရေး ဖုန်းပြောဖြစ်ကြပါတယ်။
အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ချက်မသိရသေးပါ။ အက်စတိုးနီးယား ၊ လက်ဗီးယား ၊ ဘူဂေးရီးယား နဲ့လစ်သူရေးနီးယား တို့ က သူတို့ နိုင်ငံတွေက ရုရှားသံတမန်တွေကို မောင်းထုတ်လိုက်ပါပြီ ။
နောက်ဆုံးသတင်းအရ ပိုလန်နယ်စပ်နား က လဗစ်ဗ်မြို့ ကို ရုရှားတွေက လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းစစ်သည် ၆သောင်းလောက်ကလည်း ယူကရိန်းဖက်ကနေ ခံချပေးနေပါတယ်။ ဥရောပ ပါလီမန်က ရုရှားနဲ့ ဘီလာရုစ်သံတမန်တွေကို တက်ခွင့်မပေးတော့ပါဘူး။
ယူကရိနျးကို ရုရှားဝငျတဲ့ ( ၂၃) ရကျမွောကျနေ့
ယူကရိနျး- ရုရှားစဈက ဒီအတိုငျး ဆကျသှားမယျဆိုရငျ ယူကရိနျးပွညျသူတှေ ငတျမှတျခေါငျးပါးသှားစရာ ရှိနတေယျလို့ ကုလသမဂ်ဂက သတိပေးလိုကျပါတယျ။ လကျရှိမှာ တိုငျးပွညျက ထှကျပွေးနရေတဲ့ ယူကရိနျး ၃သနျးကြျောသှားပွီ ဖွဈပါတယျ။
ရုရှားလကွေောငျး တိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ နအေိမျ တိုကျတာ အဆောကျအအုံ တျောတျောမြားမြား ပကျြစီးကုနျပါပွီ။ အခွအေနေ ပွနျလညျတညျငွိမျမယျဆိုရငျ ၁၀ စုနှဈအတှငျး တိုငျးပွညျအခွအေနေ ကို အကောငျးဖကျကို ရောကျနိုငျဦးမှာ မဟုတျပါဘူး ။
ရုရှားကို ယူကရိနျးတှကေ ကွုံသလိုခုခံတိုကျခိုကျနတောမို့ ရုရှားကလညျးမဲမဲမွငျရာပဈတဲ့အဆငျ့ဖွဈသှားပါပွီ ။ ဒါကွောငျ့ အရပျသားအသအေပြောကျနညျးအောငျလို့ ပွငျသဈ ၊ ယူကေ နဲ့ ယူအကျဈ တို့ က ကုသမဂ်ဂ လုံခွုံရေးကောငျစီကို ဒီနေ့ ယူကရိနျးအရေးကို ဝိုငျးဝနျးစဉျးစားပေးဖို့အတှကျ ဆငျ့ချေါလိုကျပါတယျ။
ဗွိတိနျကတော့ ပိုလနျှနိုငျငံထဲကို လယောဉျပဈလကျနကျတှနေဲ့ စဈသားတှေ ကို ထပျမံပို့လှတျထားပါတယျ။ ရုရှားက အရပျသားတှကေို ပဈမှတျထားပွီး တိုကျခိုကျလာပွီး စဈရာဇဝတျမှုကြူးလှနျတယျလို့ ကုလသမဂ်ဂက သကျမှတျလာပွီဆိုတာနဲ့ ယူကရိနျးကိုဝငျတိုကျဖို့အတှကျ အဆငျသငျ့လုပျနတောပါ။
ရုရှားသမ်မတပူတငျက ဒီနေ့ ရုပျသံကနေ မိနျ့ခှနျးပွောသှားပါတယျ။ “ ဒီကနေ့ နိုငျငံရေး ပွဿနာမှာ စဈမှနျတဲ့မြိုးခဈြ ရုရှား တှနေဲ့ သစ်စာဖောကျမြိုးဖကျြ လောကျကောငျတှကေို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး မွငျသာသှားပွီဖွဈပါတယျ။
တိုငျးပွညျမှာ အဲ့ဒိလောကျကောငျတှကေို ရှငျးထုတျသှားမယျ” လို့ ရုရှားစဈပှဲကို မထောကျခံတဲ့ ပွညျသူအခြို့ ကို ရညျရှယျပွီး မိနျ့ခှနျးထဲမှာ ထညျ့ပွောသှားပါတယျ။.
ဂြိုးဘိုငျဒနျကတော့ ရုရှားတှေ ယူကရိနျးကို မဝငျခငျမှာ ကြူးကြျောတော့မယျ ၊ ကြူးကြျောတော့မယျ ဆိုပွီး တောကျလြှောကျပွောနသေလို အခုလညျး ပူတငျက စဈရာဇဝတျကြူးလှနျနပွေီ လို့ ပွောနပွေနျပါပွီ ။ အဲ့ဒါနဲ့ ပတျသကျပွီး ကရငျမလငျးအစိုးရက ဘိုငျဒနျကိုယျ့ပွောစကားကို ကိုယျတာဝနျယူရမယျလို့ တုံ့ပွနျထားပါတယျ။
ခါကီဗျ ဒသေက ယူကရိနျး နိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျ တှကေို ရုရှား စဈတပျတှကလိုကျလံဖမျးဆီးမှုတှေ လုပျနပေါတယျ။ အခုဆိုရငျ ထငျရှား တဲ့ခေါငျးဆောငျ ၂ယောကျတောငျ ဖမျးဆီးမိသှားပါပွီ ။
နိုငျငံတကာအားကစားဆိုငျရာ အနုညာတခုံရုံးက ရုရှားဘောလုံးအသငျး ၂၀၂၂ ကာတာကမ်ဘာ့ ခွစေဈပှဲကို ဝငျကနျခှငျ့မပွုတော့ပါဘူး။ ရုရှားအသငျးကို ပိတျပငျထားဆဲဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့နျးလှဲပိုငျးမှာ အမရေိကနျသမ်မတဂြိုးဘိုငျဒနျက တရုတျသမ်မတ ရှီကငျြ့ဖငျြနဲ့ ရုရှား- ယူကရိနျးအရေး ဖုနျးပွောဖွဈကွပါတယျ။
အသေးစိတျထုတျပွနျခကျြမသိရသေးပါ။ အကျစတိုးနီးယား ၊ လကျဗီးယား ၊ ဘူဂေးရီးယား နဲ့လဈသူရေးနီးယား တို့ က သူတို့ နိုငျငံတှကေ ရုရှားသံတမနျတှကေို မောငျးထုတျလိုကျပါပွီ ။
နောကျဆုံးသတငျးအရ ပိုလနျနယျစပျနား က လဗဈဗျမွို့ ကို ရုရှားတှကေ လကွေောငျး တိုကျခိုကျမှုတှေ လုပျနပေါတယျ။ နိုငျငံတကာ စတေနာ့ဝနျထမျးစဈသညျ ၆သောငျးလောကျကလညျး ယူကရိနျးဖကျကနေ ခံခပြေးနပေါတယျ။ ဥရောပ ပါလီမနျက ရုရှားနဲ့ ဘီလာရုဈသံတမနျတှကေို တကျခှငျ့မပေးတော့ပါဘူး။
သားဦး_သားနှောငျး ယူကောငျ_မယူကောငျးး…
ညညည်းနက်တဲ့အထိ အိပ်ယာထဲအထိ ဖုန်းသုံးခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးများ